Boobe Yuusuf Ducaale oo khudbad dheer ku sagootiyay xil-wareejintiisa, markalena ku celiyay dalab uu hore ugu jeediyay Madaxweyne Siilaanyo | Somalidiasporanews.com
Boobe Yuusuf Ducaale oo khudbad dheer ku sagootiyay xil-wareejintiisa, markalena ku celiyay dalab uu hore ugu jeediyay Madaxweyne Siilaanyo
September 4, 2012 | Filed under: Wararkii ugu Dambeeyay | Posted by: Editor Hargeysa 4, Sept. 2012 (SDN)- Wasiirka iyo wasiir kuxigeenka cusub ee wasaaradda Warfaafinta Somaliland, Mr. Abiib Diiriye Nuur (Timo-cad) iyo Mr. Cabdullaahi Maxamed Daahir (Cukuse), ayaa maanta si rasmi ah xilkaas ugala wareegay wasiirkii hore Mr. Boobe Yuusuf Ducaale.
Wasiirkii hore Mr. Cabdi Yuusuf Ducaale (Boobe) oo dhowaan Madaxweyne Siilaanyo u sadqeeyay Agaasime-waaxeedyo uu shaqada ka fadhiisiyay, waxa uu hadal dheer ka jeediyay munaasibadda uu xilka ku wareejiyay, taasoo uu dhinacyo kala duwan kaga hadlay.
Khudbad qoraal ah oo Mr. Boobe xilka ku galbiyay, waxa uu ku dalbaday in la fuliyo degreeto uu 27-kii August xilalka kaga qaaday Agaasimihii hore ee Telefishanka Qaranka Mr. Axmed Saleebaan Dhuxul iyo Agaasimihii wargeyska dawladda ee Dawan Mr. Sayid Cismaan Mire, taasoo uu fulinteeda ku nisbeeyay dhawrida milgaha dawladnimo iyo maamuuska habsami-u-socodka maamul, wuxuuna ku bilaabay hadalkiisa; “Wasiirka cusub ee Wasaaradda Warfaafinta iyo Wacyi-gelinta, marti-sharafta, shaqaalaha iyo dhammaan dadkiinna ka soo qayb-galay xafladdan bilan ee aan xilkii Wasaaradda Warfaafinta iyo Wacyi-gelinta ku wareejinayo, aniguna aan ku sii dallacayo ee aan ku noqonayo Wasiirkii hore ee Warfaafinta iyo Wacyi-gelinta, waxaan idin leedahay soo-dhawaada.
Madashan uma aan hollan in aan ka jeediyo khudbad dheer oo aad ku hafataan, qaarkiinna iguba hiifaan. Xaasha! Waxaan u holladay in aan si sar-ka-xaadis ah u guud maro wax-qabadkayagii koobnaa, muddadii saddexda bilood ahayd ee aan halkan joogay ama aan hoggaankaba ka ahaa.
Marka hore Ilaaha Maxamed samo ku uumay ayay gallad iyo mahadiba u sugnaadeen. Mar labaadka waxaan halkan mahad aan duugoobin uga celinayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Maxamuud, Siilaanyo, oo xilkan ii igmaday bishii Maarj 14dii 2012ka, isla markaana aan la wareegay 19kii Maarj, 2012ka. Waxaan leeyahay, Mudane Madaxweyne kalsoonida aad xilkaa iigu dhiibtay mahad iyo abaalba waan kuugu hayaa. Qaddarin iyo qiimayn tix-gelintooda leh ayay ahaayeen. Mudane, Madaxweyne, waxa kale oo aan kaaga mahad-celinayaa xil-ka-qaadistii 29kii Ogos 2012ka oo aanan ka xumaan, bal se aan naxariis iyo naruuraba u qaatay. Iyadana waan kaaga mahad-celinayaa oo qaddarin iyo qiimaynba waan u qaadanayaa. Waxa kale oo aan qof ahaan, Madaxweyne, kaaga mahad-celinayaa qaddarintii iyo tix-gelintii aynu ku wada hawl-gallay muddadii koobnayd ee aynu wada-shaqaynaynay, taas oo salka ku haysay muddadii dheerayd ee aynu soo wada-shaqaynay ama soo wada-halgannayba, kana soo bilaabmaysay ku-sinnaan 1976kii.
Afartaasi waa arar iyo dadab-galkeedii. Hoos aan u soo dego. Markii aan xilka tirsaday, waxaanu hawsha ka bilownay sidii aanu u hagaajin lahayn duruufta nololeed iyo ta shaqo ee Wasaaradda Warfaafinta iyo Wacyi-gelinta. Iyada oo ay haynta iyo dhaqaaluhuba na xukumayeen, waxaanu gufaynta qabyada ku ballaysinnay in aanu horumar aan badnayn ka samaynno xaaladda nololeed ee ciidanka Wasaaradda ilaaliya oo aanu u dhisnay meelo kooban oo ay seexdaan iyo meel ay ku cunteeyaan.
Intaa yar ka dib waxaanu bilownay in aanu nadiifinno wejiga hore ee Wasaaradda oo aanu ka rarno buulashii yar yaraa ee foosha xumaa si aanu u muujinno quruxda qarannimada iyo dawladnimada.. Intaa ka dib waxaanu qandaraas la gallay shirkadda Daryeel si ay dhagax qoran u geliso wajahadda Wasaaradda. Boqol mitir ayaanu gelinnay dhagaxii qornaa, annaga oo qorshaysannay in aanu ku darno albaab saddexaad iyo 87 mitir oo kale oo dhagax qoran ah, hawshaas oo aanu hirgelin lahayn bal se aanu waqtigu nagu simin. Waxa intaa noo raacay in aanu qorshaysannay in aanu waddada laamida iyo derbiga inta u dhexeysana dhagax qoran dhulka dhigno. Waxaanu ku guulaysannay in aanu tobankii mitir ee ugu horreeyay dhagaxaa qoran dhigno. Hawshan fulinteeda waxaanu uga mahad-celinaynaa dad door ah oo uu ka mid yahay mulkiilaha shirkadda Al-nuur.
Tallaabaii taa xigtay waxay ahayd dayac-tirkii iyo qurxintii dhismaha Radio Hargeysa oo qaybo ka mid ah aan ilaa 1953kii waxba laga qaban, oo weliba duqayntii Hargeysana uga danbeysay. Waxaanu ku guulaysannay in aanu dhismahaa dhammaanti gudaha dib uga hagaajinno, albaabbada ka wada beddello oo qaar saag ah aanu gelinno. Waxa kale oo noo hirgashay in aanu markii ugu horreysay dhulka oo dhan dhigno mar mar. Intaa kagama aanu hadhin, bal se xafiisyada Radio Hargeysa oo dhan wixii qalab yaallay waanu ka beddellay oo mid cusub ayaanu dhignay.
Ilaahay adiga iyo inta kula hawl-gelaysaba ha idinku gargaaro oo ha idinku astuuro hawlaha xasaasiga ah ee idin sugaya. Sidaasna waan ku duceeyay. Aammiin. Gobannimo dadkaa mudan, Galladdana Allayska leh.”